HETSIKA MIHAMY MADA FASHION : Notolorana mariboninahitra ireo mpanandratra ny « Vita malagasy »
Fahombiazana ny andiany faharoa tamin’ny hetsika « Mihamy Mada Fashion ». 16 février 2021
Tonga namarana ity hetsika ity, tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahan-tena Mahamasina, ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo sy ireo mpiara-miasa aminy, omaly.
Naharitra telo andro moa ny hetsika ka omaly 24 febroary no nifarana tanteraka. Samy niaiky ireo mpampiranty sy mpahay haikanto, haihaingo ary mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny lamaody tonga teny an-toerana fa zava-dehibe ity hetsika ity satria sady manandratra ny haihaingo sy ny tontolon’ny famoronana eto Madagasikara no manandratra ny mpanakanto koa.
Hita teny an-toerana fa nihamaro ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny lamaody liana tamin’ny hetsika. Araka ny nambaran’ny Minisitra tamin’ny fanombohana, tsy hionona fotsiny amin’ny ezaka rehetra efa vita ny Minisitera fa hampiroborobo hatrany ny fanandratana ny vita malagasy. Tahaka ny asa rehetra ny tontolon’ny haihaingo sy ny tontolon’ny famoronana zava-kanto eto Madagasikara, mahavelona rehefa ifotorana ary mahatafita sy mahalasa lavitra.
Marihina fa misy amin’ireo mpandray anjara tamin’ity “Mihamy Mada Fashion” ity no efa re laza maneran-tany noho ny talentany. Voasokajy ao anatin’izany ny “BoGasy” izay efa nampiakanjo ireo ekipam-pirenena Barea ary efa nampiakanjo ilay kintan’ny baolina kitra frantsay, Kylian Mbappé ihany koa. Misy amin’izy ireo koa no fanta-daza tamin’ny fampiakanjona ny mpanakanto malagasy mpihira toa an’i Shyn, Denise, Tence Mena sy ireo maro hafa. Tanora no tena betsaka mandray anjara amin’ny “Mihamy Mada Fasion”. Sehatra mbola azo trandrahina tsara ny tontolon’ny haihaingo eto Madagasikara, antony nampirisihan’ ny Minisitra ireo mpiangaly hiditra lalindalina kokoa.
Nandritra ny famaranana ity hetsika ity koa no nanoloran’ny Minisitera mariboninahitra ho an’ireo miangaly lamaody eto Madagasikara. Nisy tamin’izy ireo no notolorana ny « Officier », nisy koa ny nomena « Chevalier » sy nankarina ho eo amin’ny « Comandeur ». Fampirisihana ireo manan-talenta hiroso amin’ny lalindalina kokoa ny fanomezana izao mariboninahitra izao.